Akụkọ - Uwe Pinyang na-emepụta ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe na-arụ ọrụ ịkwa akwa, dyeing na ịkwa akwa
Men S Uwe
Smụ nwoke S Hoodie & Sweatshirt
Smụ nwoke S T-uwe elu
Uwe Nwoke S
Ndị nwoke S Jacket
Ndị nwoke na akwa
Uwe Nwanyi S
Mụ nwanyị S Hoodie & Sweatshirt
Mụ nwanyị S T-Shirt
Women S uwe elu
Uwe Smụaka S
Girlsmụ agbọghọ Akwa
Ndị Ahịa Ndị Ahịa
Uwe Pinyang na-emepụta ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-agbanwe agbanwe na-ejikọ ịkwa akwa, dyeing na ịkwa akwa
Enwere ike ịnabata maka naanị uwe abụọ ma ọ bụ atọ
N'ihi nnabata nke "ụlọ ọrụ rhinoceros" nke Alibaba, ngbanwe ọgụgụ isi nke ụlọ ọrụ na-emepụta uwe aghọwo isi okwu na ụlọ ọrụ ahụ ọzọ. N'ezie, ebe ọ bụ na ejiji ejiji mba ndị ọzọ na-abụkarị "ngwa ngwa ngwa ngwa", ọ bụrụla ọrụ pụrụ iche maka ụlọ nrụpụta uwe iji hụ na ha nwere ike merie na asọmpi dị egwu iji mezuo mmepụta nke ọtụtụ dịgasị iche iche, obere ogbe na ngwa ngwa.
Dị ka ụlọ ọrụ textile ochie nke nwere akụkọ ihe mere eme nke afọ 12, ijide ohere ọ bụla nke oge a bụ ngwa agha anwansi iji nwee ọganihu na-adịgide adịgide. Kemgbe 2019, ọrụ a agbanweela, site na ịkwa akwa, ibi akwụkwọ na agba ka ị nweta akwa na ịkwa akwa na teknụzụ ozi ihe atụ Ebubela usoro ntinye nke ngwa ngwa agile na mgbanwe mgbanwe na njikọ niile nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ niile. Taa, oge nnyefe nke iwu iwu ụlọ ọrụ Pinyang agafeela site na ụbọchị 40 nkịtị ruo ụbọchị 15, yana usoro nkwụghachi ọsọ ọsọ (iwu ndị na-erughị 2000 iberibe) agafeela ụbọchị 7. N'ihi nzaghachi a ngwa ngwa.
Obere usoro, ka ọ ka njọ. Nke a bụ nkwenye nke ụlọ ọrụ akwa. Ka ọ dị ugbu a, ụfọdụ iwu ụlọ bụ ọbụna 2 ma ọ bụ 3 iberibe, na enwere naanị 128 iberibe otu SKU nke akara egwuregwu esenidụt, nke bụ ihe achọrọ nke obere ogbe, ọtụtụ ogbe na oge nnyefe ọsọ ọsọ. Ndị ụlọ ọrụ iji chụsoo arụmọrụ, na nyocha ikpeazụ bụ iji melite asọmpi, ndị ọzọ enweghị ike ịnakwere iwu ị nwere ike iwere, nke a bụ uru. Nke a na-enyekwa aka maka mmepe ogologo oge nke ụlọ ọrụ. “
89 Qessen Road, Industriallọ Ọrụ Na-etinye Aka na Ofesi, Xinjian District, Nanchang City, Jiangxi Province, China